Henoy ny onjam-peo tianao amin'ny Mac misy anao miaraka amin'ny Radium - Radio Internet tonga lafatra | Avy amin'ny mac aho
Raha miasa eo imason'ny besinimaro isika, nefa mandany ora maro eo alohan'ny solosaina, ny zavatra azo inoana indrindra dia ny hiezahantsika hamelona ny fijanonantsika amin'ny alàlan'ny mozika. Etsy andaniny, manana serivisy mozika mikoriana samihafa misy eny an-tsena isika, na Apple Music na Spotify. Na afaka misafidy isika henoy ny radio mahazatra rehefa mijaly amin'ny dokambarotra.
Raha misafidy radio isika dia tsy mila mividy na mampiasa radio taloha izay tsy miova dial intsony, satria misaotra ny Mac, afaka manao izany isika mifandraisa haingana amin'ireo toby fampielezam-peo amin'ny Internet manerana an'izao tontolo izao, mba hahafahantsika mifamadika haingana amin'ireo gara misy rehetra. Iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra amin'io lafiny io ny Radium.
Ary miteny aho amin'ity lafiny ity, satria misy be dia be ny fampiharana mihaino ny onjam-peo ao amin'ny Mac App Store, saingy manolotra antsika karazana sy safidy maro dia vitsy tokoa. Raha ny tena izy, Radium dia iray amin'ireo rindranasa lafo indrindra izay azontsika jerena ao amin'ny Mac App Store mba hihainoana ireo fandaharana ankafizintsika, satria ny vidiny dia 10,99 euro, vidiny izay azontsika heverina ho be loatra raha tsy manana fotoana hanandramana azy alohan'ny ividianany azy, zavatra indrisy fa tsy vitantsika.
Endri-javatra lehibe Radium
Mikaroha gara amin'ny anarany, karazana, faritra, na fitambaran'izy rehetra.
Azontsika atao ny manampy haingana ireo hirantsika ankafizintsika ao anaty lisitra faniriana, hampiditra azy io amin'ny serivisy mozika mivantana mora foana nefa tsy mila miaraka amina taratasy na paositra izay lasa very.
Ny rafitry ny fitetezana eo anelanelan'ny tobim-piantsonana dia tena intuitive ary raha tsy fantatsika izay atao hoe fihainoana dia afaka mivezivezy haingana amin'izy ireo isika fa tsy mila mandeha tsirairay.
Rehefa mahita ireo onjampeo izay mahaliana antsika indrindra ary fantatsika fa hihaino azy matetika isika dia azontsika atao ny manampy azy ireo amin'ny tianao na raha reraka isika dia afaka mamafa azy ireo haingana.
Raha vantany vao nametraka izay onjam-peo ankafizinay izahay dia afaka manasokajy sy manafatra azy ireo mba tsy ho mora ny mahita azy ireo.
Radium ~ Radio Internet tonga lafatra€ 9,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Henoy ny onjam-peo ankafizinao amin'ny Mac misy anao miaraka amin'ny Radium - Radio Internet tonga lafatra
franctastic dia hoy izy:
be dia be ny fanehoan-kevitra ratsy amin'ny Apple Store ary tsy mbola nohavaozina nanomboka ny Aug '15
Valiny amin'ny franctastic